Ingaba iSikolo samabanga amabakala ayenayo ngokwenene?
Kubafundi nabazali Izixhobo & Iingcebiso
Ngaba Ngaba Amabanga Am Bakala Ngokwenyaniso?
Abanye abafundi abahlangabezana nemingeni ebomini kunye nokuphazamiseka babhekene neengxaki ezinzima xa kuziwa ekusebenziseni iikholeji kunye neeprogram, kuba imivuzo eninzi yemfundo kunye neenkqubo zibagweba ngezinto ezifana namabanga kunye neemvavanyo zokuvavanya.
Ukufunda kubalulekile, kunjalo, kodwa ke loo mabakala abalulekile kuba bubungqina bodwa obubonisa ukuba sifunde.
Ubomi bobubomi, abafundi banokufunda iindawo ezininzi esikolweni esiphakamileyo ngaphandle kokufumana amabakala ukufanisa ulwazi lwabo, kuba izinto ezinokubakho nokuhamba ziyakuthintela amabakala.
Oku kuthetha ukuba abafundi abafanele banyamekele amalungu entsapho, okanye abo basebenzayo imisebenzi yomsebenzi ebusuku, ngamanye amaxesha bahlawulwa ngenxa yezinto ezingekho phantsi kwazo.
Ngamanye amaxesha amabakala amabi abonisa umfanekiso wokwenene wokufunda kwethu, kwaye ngamanye amaxesha afika ngenxa yento ehluke kakhulu.
Ingaba ibanga lesikolweni samabanga? Inqaku leemfundo eziphakamileyo zamabanga aphezulu xa unethemba lokuya kwiikholeji. Umgangatho wesigaba semfundo yinto enye iikholeji ezinokuthi ziqwalaselwe xa zigqiba ukuvuma okanye ukuphika umfundi.
Ngamanye amaxesha, abasebenzi abamkelweyo banako ukujonga ngaphaya komgangatho wezinga eliphantsi, kodwa ngamanye amaxesha kufuneka balandele imithetho eqinileyo enikwe zona.
Kodwa ukwamukelwa yinto enye; ukufumana i-scholarship enye into. Iikholeji zikhangeleka kumabakala xa zigqiba ukuba zinikezela ngemali kubafundi bezikolo eziphakamileyo.
Amabanga angaba yinto ebalulekileyo yokuqwalaselwa kwintlalo ehloniphekileyo ekolishi.
Abafundi bafumanisa ukuba ukubandakanyeka kuluntu oluhloniphekileyo okanye elinye iqela lenza ukuba ufumane inkxaso yemali ekhethekileyo kwaye uvule umnyango wamathuba angenakwenzeka. Unokuhamba phesheya kwelinye ilizwe, ube yinkokheli yekampus, kwaye ufunde ubuchule xa uyingxenye yentlangano yemfundo.
Kwakhona kubalulekile ukwazi ukuba iikholeji zingabhekanga kuzo zonke iibakala ozifumanayo xa wenza isigqibo.
Iikholeji ezininzi zijonga kuphela kwiibakala eziphambili zezemfundo xa zisetyenziselwa ukulinganisa umgangatho webakala abasebenzisa ukwenza isigqibo malunga nokwamkela.
AmaBakala awanomdla xa kufikelele ekufikeleleni kwiprogram ethile kwiikholeji. Unokuhlangabezana neemfuno kwiyunivesiti oyithandayo, kodwa unokuphikiswa yisebe apho ukhetho lwakho oluphezulu luhlala khona.
Ungalindelanga ukukhupha umlinganiselo wakho webanga lokubala ngokuthatha izifundo ezikhethileyo. Akunako ukukhangela kwi-kholeji isebenzisa.
Ngaba ibakala leekholeji? Ukubaluleka kwamabakala kunzima kakhulu kubafundi beekholeji. AmaBakala angabangela izizathu ezininzi ezahlukeneyo.
Ngaba udaba olusanda kumabanga? Abafundi abatsha bebakala bonyaka baninzi kubo bonke abafundi abafumana inkxaso-mali. Ikholeji nganye ekhonza abafundi abafumana uncedo lwe-federal iyadingeka ukuseka umgaqo-nkqubo malunga nenkqubela yezemfundo.
Bonke abafundi abafumana uncedo lwe-federal bahlolwe inkqubela ethile ngexesha lonyaka wokuqala. Abafundi mabazalise iiklasi apho babhalisela khona ukugcina uncedo lwezemfundo; oko kuthetha ukuba abafundi abafanele bahluleke kwaye akufanele bahoxise kwiikhosi ezininzi kwixesha lokuqala leesibini.
Abafundi abangaphumeleli kwixesha elimisiweyo baya kufakwa ekunqunyulweni kwezemali.
Yingakho abama-freshmen abanako ukukwazi ukuphumelela iiklasi ngexesha le-semester yabo yokuqala: izifundo ezingaphumeleli ngexesha le-semester yokuqala zingenza ukuba ulahlekelwe uncedo lwemali kunyaka wokuqala wekholeji!
Ngaba zonke iibakala kumabanga ekolishi? Umlinganiselo wakho wokubala webakala ubalulekile kwizizathu ezininzi, kodwa kukho amaxesha apho amabakala kwizifundo ezithile azibalulekanga njengamanye amaziko.
Ngokomzekelo, umfundi ophezulu kwimathematika mhlawumbi uya kufuneka adlulise izifundo zeematika zokuqala zeminyaka kunye neB okanye bhetele ukuqhubela phambili kwizinga elilandelayo lemathematika. Ngakolunye uhlangothi, umfundi ofanelekileyo kwintlalo-ntsapho ingaba yilungile ngebanga le-C kwiminyaka yokuqala yematriki.
Lo mgaqo-nkqubo uza kwahluka kwiikholeji enye ukuya kwenye, ngoko qiniseka ukuba uhlolisise ikhathalogu yakho kwikholeji ukuba unemibuzo.
Umlinganiselo wakho webanga lokubala uza kubaluleka ukuba uhlale kwikholeji.
Ngokungafani nezikolo eziphakamileyo, iikholeji zingakucela ukuba ushiye xa ungenzi kakuhle!
Ikholeji nganye iya kuba nomgaqo-nkqubo malunga nokuma kwezifundo. Ukuba uwela ngaphantsi kwebanga elilodwa lomgangatho ungasetwa kwi-probation academic okanye ukumiswa kwezemfundo.
Ukuba ubeka kwiingqinisiso zemfundo, uya kunikwa ixesha elide lokuphucula amabakala akho-kwaye ukuba uyakwenza, uya kuthathwa uvavanyo.
Ukuba ubeka kwi-suspension yezemfundo, unokufuneka "uhlale" nge-semester okanye unyaka ngaphambi kokuba ubuyele kwiikholeji. Emva kokubuya kwakho, uya kuhamba ngexesha lokulinga.
Uzakufuna ukuphucula amabakala akho ngexesha lovavanyo lokuba uhlale ekholeji.
AmaBakala nawo kubalulekile kubafundi abafuna ukuqhubeka nemfundo yabo ngaphaya kwe-degree yangaphambili yekota yeekholeji. Ukwenza oku, abanye abafundi banokukhetha ukulandela i-degree degree okanye Ph.D. kwisikolo esikolweni.
Ukuba uceba ukuya ekugqibeleni isikolo emva kokuba ufumane i-degree-bachelor degree, kuya kufuneka usebenzise isicelo, njengokuba ufanele ufake isicelo kwiikholeji esikolweni esiphakeme. Izikolo ezithweswe izikolo zisebenzisa amabakala kwaye amanqaku okuvavanya njengemibandela yokwamkela.
Funda malunga neBakala kwiSikolo esiphakathi
Indlela yokuphakamisa isandla sakho kwiKlasi
Uluhlu lweZiko leeNkokeli zeSikolo
Umxholo Umbutho Iipatheni
Ukubhala iiNgxenye zeStats Play Script
Amaqiniso NgamaQhinga okuDabuka kweSikolo esiphakamileyo
Iingxoxo zengxoxo eziphikisanayo
Iphepha leSihloko Sephepha
Iibhodi zekhibhodi kunye neengxaki zokubhala
I-Berkelium Element Facts - Bk
Uluhlu lwabenzi bomhlaba abahamba phambili beFly Reel Maker
INgesi yeBhizinisi - Intlanganiso Yomso
Ixesha elidlulileyo eliqhubekayo (iiVenzi)
I-Stencils Collection Simahla
"Isifundo sePiano" Isikhokelo sokuFunda
'Ibali leHora' Imibuzo yoFundo kunye neNgxoxo
Iimpawu zeeNicknam ze-Poker Hands eTexas Holdem
Imibhiyozo yaseBabon Ehlabathini
Ingelosi Ezingummangaliso Ingabaphilisa Abantu EBhayibhileni YaseTobit?
Imibuzo eqhelekileyo ibuzwe ngexesha le-Football Head Coach Interview
IsiGwebo sesiThili (Scesis Onomaton)
Uninzi lweMisebenzi Yenza iiYards eziqhutywe yiKholeji yaseKholeji
I-Blombos Cave - I-Middle Age yobuGcisa bobuGcisa noBuchule boBuchule
Mat Groening's 10 Favorite Episodes ze 'The Simpsons'